Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Maamulaha Moderna: Faafida COVID-19 waxay dhammaan doontaa badhtamaha 2022
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • Wareysiyo • Investments • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Madaxa Sare ee Moderna, Inc., Stephane Bancel
Haddii aad eegto ballaarinta warshadaha ee awoodda wax-soo-saarka lixdii bilood ee la soo dhaafay, qiyaaso ku filan waa in la helaa badhtamaha sannadka soo socda si qof walba oo Dhulkaan ku nool loo tallaalo.
Sida laga soo xigtay Stephane Bancel, xaaladda COVID-19 waxay aakhirka la mid noqon doontaa tan hargabka.
Tallaalka COVID-19 ee Moderna waxaa lagu ansixiyay ku dhawaad ​​100 waddan, halka uu sidoo kale ka mid yahay saddex daawo oo loo adeegsaday ololaha tallaalka ee Mareykanka.
Waxaa jiri doona jubbado la heli karo xitaa dhallaanka goor dhow iyo sidoo kale qiyaaso xoojinaya kuwa u baahan.
Madaxa Fulinta ee Moderna, Inc., oo ah shirkad dawooyinka iyo teknolojiyadda Mareykanka oo fadhigeedu yahay Cambridge, Massachusetts, Stephane Bancel, ayaa soo jeedisay in xaaladda COVID-19 ay aakhirka la mid noqon doonto tii hargabku ku dhacay, iyo kororka soo-saarka tallaalka cudurka faafa ee coronavirus ugu dambeyntii wuxuu soo afjarmay bartamihii 2022.
"Haddii aad eegto ballaarinta warshadaha ee awoodda wax-soo-saarka lixdii bilood ee la soo dhaafay, waa in la helaa qiyaaso ku filan badhtamaha sannadka soo socda si qof walba oo Dhulkaan jooga loo tallaalo," ayuu Bancel ku yiri wareysiga.
Sida laga soo xigtay agaasimaha guud ee farmashiyaha Mareykanka, waxaa jiri doona jubbado la heli karo xitaa dhallaanka sida ugu dhakhsaha badan iyo sidoo kale qiyaaso xoojinaya kuwa u baahan.
“Kuwa aan is tallaalin si dabiici ah ayay isku tallaalaan maxaa yeelay kala duwanaanshaha Delta waa mid aad u faafa,” ayuu yiri madaxa fulinta.
Markii la weydiiyay goorta aadamigu awoodi doono inuu ka baxo masiibada, oo horey u aragtay in ka badan 219 milyan oo qof oo cudurka qaba iyo in ka badan 4.5 milyan oo dhintay, kuna soo laabanaya nolol caadi ah, Bancel wuxuu ku jawaabay: "Laga bilaabo maanta, sannad gudaheed, waxaan u malaynayaa."
Casri ahTallaalka COVID-19 ee laba-qiyaasood ah ayaa lagu ansixiyay illaa 100 waddan, halka sidoo kale uu ka mid yahay saddex daawo oo loo adeegsaday ololaha tallaalka ee Mareykanka. Jabku wuxuu ku faanaa heer aad u sarreeya oo wax-ku-ool ah oo ah 93% lix bilood ka dib markii la maamulay tallaalkii labaad, oo aad uga yaraaday 94.5% oo la soo sheegay intii lagu jiray wejigiisa-saddex tijaabo caafimaad.
Si kastaba ha noqotee, Bancel wuxuu ku adkaystay in kuwa la tallaalay “shaki la’aan” ay u baahan doonaan dib -u -cusboonaysi mar uun si looga ilaaliyo fayraska. Wuxuu sheegay inuu filayo in dadka da'da yar ay qaadan doonaan tallaal xoojin ah saddexdii sanoba mar iyo dadka waayeelka ah - sannadkiiba mar.
Casri ahXoojiyaha wuxuu ka kooban yahay kala badh qiyaasta maaddada firfircoon marka la barbardhigo duritaankii asalka ahaa, kaasoo shirkadda siinaya fursad dheeraad ah oo ay ku kordhiso wax soo saarka, ayuu yiri.
“Mugga tallaalka ayaa ah waxa ugu weyn ee xaddidaya. Kala badh qiyaasta, waxaan heli lahayn saddex bilyan oo qiyaasood oo adduunka oo dhan laga heli karo sannadka soo socda halkii laga heli lahaa kaliya laba bilyan, ” Casri ah Maamulaha ayaa sharxay.
Moderna wuxuu ka mid ahaa lixda sameeya tallaalka kuwaas oo Amnesty International lagu eedeeyay inay hurinayaan “qalalaasaha xuquuqda aadanaha ee aan horay loo arag” iyagoo diidan inay ka qeyb qaataan dadaallada lagu xoojinayo bixinta tallaalka adduunka oo ay doorbidaan inay la shaqeeyaan waddamada hodanka ah.
Sida laga soo xigtay warbixinta Amnesty International, shirkadda Mareykanka oo ay weheliyaan Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca iyo Novavax ayaa eedda lahaa xaqiiqda ah in 5.76 bilyan oo qiyaasood oo dunida laga maamulo, kaliya 0.3% ay aadeen waddamada dakhligoodu hooseeyo .
Nick Eckerling wuxuu leeyahay,
Oktoobar 3, 2021 at 18: 27
COVID wuu yeeli doonaa